ပျော်သလို နေပါကွယ်… | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Ideas & Plans » ပျော်သလို နေပါကွယ်…	11
Posted by johnnydeer on Mar 26, 2015 in Ideas & Plans | 11 comments
အမြန်လမ်းတလျှောက် တိုက်ကြ မှောက်ကြ သေကြတာတွေ မေ့ထားပါတယ်….
စီးလုံးပျောက်သွားတဲ့ မလေးရှားလေယာဉ်ကြီးအကြောင်း မေ့ထားပါတယ်…
သစ်တောတွေ ခုတ်ချင်သလို ခုတ်နေကြတဲ့ ခရိုနီဆိုတာတွေ မေ့ထားပါတယ်…
ကိုယ့်တိုင်းကိုယ့်ပြည်မှာ နေစရာမရှိ ကျုးကျော်ဖြစ်နေကြတာတွေ မေ့ထားပါတယ်…
မြန်မာ့ထိပ်ပိုင်း အာဏာရခေါင်းဆောင်ဆိုသူများအကြောင်း တွေးမိပြန်တော့…
မုသာဝါဒ ဆိုတာကြီးကို မေ့ထားပါတယ်…
ကလေးတွေ ကျောင်းပို့ရမယ် ဆိုပြန်တော့လဲ…
ဆိုးဝါးလှတဲ့ ပညာရေးစနစ်အကြောင်း မေ့ထားပါတယ်…
နိုင်ငံရပ်ခြားက မိဝေးဖဝေး သူငယ်ချင်းတွေအကြောင်း မေ့ထားပါတယ်…
လယ်မဲ့ ယာမဲ့ ထောင်ထဲရောက်နေတဲ့ တောင်သူဦးကြီးတွေကို မေ့ထားပါတယ်…
လာဘ်ပေး…ရန်မလို ဆိုတာကြီးကို မေ့ထားပါတယ်…
မြန်မာ အစိုးရအကြောင်း မေ့ထားပါတယ်….
lu lu says: နောက်ဆုံး ကိုယ့်ကိုယ်ကိုလည်း မေ့ ထားသင့်ရင် မေ့ရမှာပေါ့ နော်
Mr. MarGa says: ဆိုတော့
ပျော်ရော ပျော်ရဲ့လား Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 12381
ခင်ဇော် says: Credit to Thaung Thansu
ကလေးတွေ သိပ်တော်လာတာဟာ ကြောက်ဖို့ကောင်းတယ် ထင်နေတဲ့ နိုင်ငံ…
သိပ်တော်တဲ့ ကလေးတွေ အတွက်
ထောင်တန်းနဲ့ သေပန်းတွေ ပွင့်တဲ့နိုင်ငံ…
မြောင်းထဲ ပစ်လိုက်ဖို့ ၀န်မလေးတဲ့ နိုင်ငံ…
မဟားတရား ဟန်ရေးပြတဲ့ နိုင်ငံ…
ဗုဒ္ဓစကားတွေ အထပ်ထပ် ကြားနေရပေမယ့်
တရားကျင့်မှု မရှိတဲ့ နိုင်ငံ…
ကျွဲ ပါးတွေ နေတဲ့ နိုင်ငံ…
ကိုယ့်မြေ ကိုယ့်ရေမှာ မေ့ပစ်ရတဲ့ နိုင်ငံ…
တရားဥပဒေမှန်း မသိတော့တဲ့ နိုင်ငံ…
ကိုယ့် အခွင့် အရေးနဲ့
ကိုယ် ကိုယ်တိုင် ဖောက်ဖျက်တဲ့ နိုင်ငံ…
အဆဲ သန်တဲ့ နိုင်ငံ…
Mike says: .♫♪♫ပျော်သလိုသာနေလိုက်ကြ♫♪♫ငိုရင်လူဖြစ်ရှုံးသတဲ့♫♪♫ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 12067
Alinsett@Maung Thura says: ပုတ်သင်ဥတူးရင် ညောင်မြစ်ပေါ်တယ်ဆိုလား…
ကိုယ့်ဗမာတွေ ပိုးစိုးပက်စက် နိမ့်ကျနေတာ မြင်တိုင်း…အရင်းစစ်လိုက်တော့ …
ဆင်းရဲမွဲတေမှု ဖြစ်အောင် ကန့်သက်ဘောခတ်ပြီး ထင်သလို ခြယ်လှယ်ထားတဲ့…ညောင်မြစ်ကြီးကိုပဲ…အုံလိုင်ကျင်းလိုက် ဆွဲနှုတ်ပစ်ချင်လာတယ်..
လုံမလေးမွန်မွန် says: မသိတော့ဘူးဗျာ.. လောလောဆယ်တော့ ရန်ကုန်မဟုတ်တဲ့ တစ်နေရာမှာ နေချင်နေတယ်… ရန်ကုန်မြို့ကြီးကို အရမ်းစိတ်ညစ်လာပြီ….
naywoon ni says: အဲ့ဒိလိုပဲ ​မေ့ထားရတာ​တွေများ​တော့ ​မေ့စရာ​တွေပါ ​မေ့​နေတဲ့ အဖြစ်​ ။
ပြဿနာတစ်​ခုခု ​ပေါ်လာတိုင်း အတိတ်​​မေ့သလိုလို ​ရွှေ​ပျောက်​သလိုလို လုပ်​တတ်​တဲ့ အစိုးမရကို ဆန့်​ကျင့်​ကြ !
johnnydeer says: ရွှေသမင်က မင်းကြီးတာကချည်းထွက်နေတော့လဲ …..အင်း…
kai says: အဲဒီလို.. ထိပ်တိုက်ရင်ဆိုင်တာတွေတွေ့ရရင်.. ထိပ်တိုက်ရင်မဆိုင်ပဲ.. လွှဲချတတ်အောင်သင်ပေးထားတဲ့.. ထေရာဝါဒတို့ရဲ့ဘာသာရေးကြီးကိုတော့.. မေ့မထားဖြစ်နေတာက.. တကယ့်အခက်..။
အဲဒါကြီးသာမေ့ထားလိုက်.. လိုချင်တဲ့အရာတွေအကုန်.. မိုးပေါ်ကကျလာမှာ.. အာမခံ..။ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 280
Courage says: ဗျာ…။
လုံလောက်မှုမရှိတဲ့ ပြည့်စုံခြင်းတွေကြားထဲမှာ အမိမြန်မာပြည်ဟာ ပျော်စရာအကောင်းဆုံး နေရာလေးပါ။